people Nepal » प्रधानमन्त्री र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तबीच के कुरा भयो ? प्रधानमन्त्री र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तबीच के कुरा भयो ? – people Nepal
प्रधानमन्त्री र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तबीच के कुरा भयो ?
फागुन ४ काठमाडौं–
चुनावको मिति घोषणाको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवसँग परामर्श गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको निजि सचिवालय स्रोतका अनुसार फागुन ८ गतेसम्म सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्दैछ । यस अघि सरकारले आयोगलाई पत्र लेखेर चुनावको तयारी थाल्न निर्देश गरेको छ । ‘आइतवार वा सोमवार चुनावको मिति घोषणा हुन्छ ।’ प्रधानमन्त्रीका एक सहयोगीले भने ।
यस अघि माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठको निवासमा भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओली संवादमा फागुन ८ भित्र चुनावको मिति घोषणा गर्ने सहमति बनेको नेताहरुले बताएका थिए ।
चुनावको मिति घोषणाको लागि प्रमुख दलका शीर्ष नेतावीच मंगलवार पनि छलफल भएको थियो । मंगलवार विहान राष्ट्रपति निवासमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्षवीच कुराकानी भएको थियो । त्यसपछि एमाले अध्यक्ष ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्डवीच बालुवाटारमा कुरा भएको थियो । त्यसपछि मंगलवार साँझ नै प्रधानमन्त्री र काँग्रेस सभापति देउवावीच कुराकानी भएको थियो । साँझ नै प्रधानमन्त्री, काँग्रेस सभापति र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच बालुवाटारमा कुराकानी भएको थियो ।
संविधान संसोधनमा एमाले लचक भएपछि सरकार चुनावको मिति घोषणाका लागि अगाडि बढ्न थालेको हो । एमालेको हिजो बसेको स्थायी समिति वैठकमा संविधान संसोधन लगायतका विषयमा कुराकानी भएको थियो । प्रधानमन्त्री आज भने काठमाडौं बाहिर कार्यक्रममा सहभागी हुँदैछन् ।